जब धेरै उपभोक्ताहरु गर्मी पम्प सम्बन्धित उत्पादनहरु किन्न, उनीहरु पाउँछन् कि धेरै निर्माताहरु जस्तै पानी को स्रोत गर्मी पम्प, जमिन स्रोत गर्मी पम्प र हावा स्रोत गर्मी पम्प को रूप मा गर्मी पम्प उत्पादनहरु को एक किसिम छ। तीन मा के फरक छ? हावा स्रोत गर्मी पम्प हावा स्रोत गर्मी पम्प ...
कसरी एक गर्मी पम्प केन्द्रीय पानी तताउने प्रणाली आकार गर्न?
आदेश मा तपाइँ एक उपयुक्त प्रणाली डिजाइन दिन को लागी, कृपया तपाइँको विशिष्ट आवश्यकताहरु अनुसार जानकारी तल प्रस्ताव गर्नुहोस्: १. कति धेरै मानिसहरु लाई यो प्रणाली बाट तातो पानी को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक छ? 2. होटल, स्कूल छात्रावास को रूप मा निर्माण को प्रकार हो, ...
सौर्य तातो पानी तताउने प्रणाली किट के हो?
एक सौर थर्मल तातो पानी तताउने प्रणाली कस्तो देखिन्छ? सौर्य तातो पानी तताउने प्रणाली को लागी सामान किट के हो? हामी उदाहरण को लागी 1000 लीटर र 1500 लीटर प्रणाली लिन्छौं। कृपया PDF फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गर्नुहोस्
कसरी डिजाइन र एक गर्मी पम्प तातो पानी प्रणाली स्थापित गर्न?
कसरी डिजाइन र एक गर्मी पम्प तातो पानी प्रणाली स्थापित गर्न? डिजाइन र गर्मी पम्प को स्थापना गर्न को लागी पेशेवर व्यक्तिहरु लाई काम गर्न को लागी आवश्यक छ, तर कहिले काहिं तपाइँ तपाइँको आफ्नै एयर स्रोत गर्मी पम्प तातो पानी तताउने diy गर्न चाहानुहुन्छ ...